Ukungasebenzi kwe-Pragmatic cache > UVielhuber uDavid
Ukungasebenzi kwe-Pragmatic cache01
Ukunikezelwa kwecala lomncedisi ngoku kuyinxalenye ye-repertoire esemgangathweni yewebhusayithi kunye nokusetyenziswa. Izikhangeli ezinje ngeGoogle Chrome nazo zihlala zisebenza ngokufihlakeleyo kangangoko ukuze kuncitshiswe amaxesha okulayisha kweefowuni ezongezelelweyo. I-cache invalidation le CSS iifayile / JS / Umfanekiso kusonjululwa ngoncedo mod_pagespeed , Iphelelwa / Coupe ulawulo ephepheni, a cache ibonakale okanye nejonga kakhulu kwaye ngqo kwi parameters ngamnye emva igama lefayile.
Kukho iindlela ezahlukileyo zokuba ifayile mayiphinde ilayishwe okanye hayi.
Owona mahluko olula kukuphinda ulayishe kwakhona ngesicelo ngasinye. Ukwenza oku, umane ufaka umtya ongacwangciswanga kwifayile emiselweyo kwaye unyanzele ukuphinda ulayishe (apha usebenzisa ifayile yomfanekiso njengomzekelo):
Ukuba ininzi kakhulu into elungileyo kwaye endaweni yoko ifuna ukulayisha kwakhona xa ifayile itshintshile, umhla wokugqibela wokutshintsha kwefayile uyasetyenziswa (apha usebenzisa umzekelo wefayile yeJS):
Ukuba usebenzisa ulawulo lwenguqulo njengeGit , unokusebenzisa i-hash eyahlukileyo yesibophelelo sokugqibela (uguqulelo olufinyeziweyo lwanele) (apha usebenzisa ifayile yeCSS njengomzekelo):
I-WordPress incamathela kuhlobo lwangoku lweWordPress kuzo zonke iifayile ezidityaniswe nge- enqueue_style kunye ne- enqueue_script ngokungagqibekanga . Ungayitshintsha le ndlela yokuziphatha ngokuthe ngqo kwiifowuni zomsebenzi njengengxoxo, okanye ungazitshintshela kwihlabathi jikelele kwaye usebenzise enye yezi ndlela zilapha ngasentla.: